भिडियो विकल्पहरूको साथ डिमेन्शिया फोन - Konnekt
यो Konnekt डिमेंशिया फोन
Konnekt पहिलो पागल फोन हो जुन
ठेगाना संज्ञानात्मक गिरावट. हाल अध्ययन प्रदर्शन गरियो संज्ञानात्मक समारोह सुधार गरियो6हप्तामा बढेको अनुहार-देखि-अनुहार सामाजिक संलग्नता को हप्तामा;
डिमेन्शिया भएका मानिसहरूलाई फोन कल गर्न सक्षम गर्दछ, कुनै पनि फोन भन्दा हामीले देखेको भन्दा सजीलो; र
मनोनीत छोरा, छोरीहरू र हेरचाहकर्ताहरूलाई अनुमति दिन्छ नेत्रहीन जाँच गर्नुहोस्.
डिमेन्शिया, सबैभन्दा ठूलो हत्यारा
डिमेन्शियालाई क्रुएस्ट रोग भनिन्छ किनकि यसले2मृत्युलाई निम्त्याउँछ: व्यक्तित्वको ढिलो विलुप्ति, जीवनबाट प्रस्थान पछि।
बारेमा 10% over-65s को, 30% over-85s को, र 52% वृद्ध-देखभाल निवासीहरूको पागलपन छ
पागलपन हो अशक्तताको सबैभन्दा ठूलो कारण वरिष्ठ र मा 3rd अशक्तताको बोझको प्रमुख कारण.
यो छ निराश र डरलाग्दो उनीहरु लाई परिवार बिर्सनु, निर्भर हुनु, घरमा बस्न लड्न।
यदि तपाईको परिवारको सदस्य पागल छ भने, तपाई CAN तिनीहरूको जीवनको गुणस्तरमा ठूलो भिन्नता राख्नुहोस्।
तपाईंको डिमेन्शिया केयर गाईडमा नि: शुल्क तत्काल पहुँच प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
डिमेंशिया क्यारियर क्विज लिनुहोस्
के तपाई आफ्नो बुढेसकालका बाबुआमाको लागी सबै गर्न सक्नु हुन्छ?
म सुनिश्चित गर्दछु कि मेरो बुढा बुबाआमासँग स्वस्थ आहार छ ...
किराना सामानहरूको लागि उनीहरूसँग किनमेल
खाना अनलाइन खरीद गर्दै र डेलिभर गरिँदै
जाँच गर्दै उनीहरू आफ्नै स्वस्थ खाना तयार गर्छन्
मैले प्रयास गरेको खण्डमा म तिनीहरुलाई परिवर्तन गर्न सक्दिन
स्वस्थ आहार पागलपनको लागि नियन्त्रणयोग्य जोखिम कारक हो। स्वास्थ्य पेशेवरहरूले सुगन्धित खाद्य पदार्थ र परिष्कृत कार्ब्स कटौती गर्न, प्रशोधित खाद्य पदार्थहरूलाई सीमित तुल्याउने, ट्रान्सफ्याटबाट जोगिन, ओमेगा-एक्सएनयूएमएक्स वसा बढाउने, फलफूल र तरकारीहरू लिने, दिनको 3-2 कप चिया पिउने र रक्सी न्यूनतम राख्न सल्लाह दिन्छन्।
किन यो काम गर्दछ: अत्यधिक तौल हुनु अल्जाइमरको जोखिमलाई डबल गर्दछ। सही खानाले सूजन कम गर्न सक्छ, जो न्यूरन्सलाई घाइते गर्दछ। यसले मधुमेहको जोखिमलाई पनि कम गर्न सक्छ, जसले मस्तिष्ककोषहरू बीचको सञ्चारलाई रोक्दछ। थप रूपमा, स्वस्थ बोसोले बीटा-एमाइलोइड प्लेकहरू कम गर्न सक्छ।
डिमेंशियाले न केवल सामग्रीहरू किनमेल गर्न र स्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थहरू सुरक्षित रूपमा तयार पार्ने क्षमतालाई पनि हटाउँदछ, तर आत्म नियन्त्रण पनि। तपाईंले आफ्नो अभिभावकको आहारमा बढ्ता सक्रिय भूमिका लिन आवश्यक पर्दछ।
यदि तपाइँ प्राय: भ्रमण गर्न सक्नुहुन्न भने, स्काइप एक उत्तम तरिका हुन सक्दछ तपाईलाई के खान खाई रहेछ भनेर जाँच गर्न।
म द्वारा मेरो बुढेसकालका अभिभावकको रक्तचाप जाँच गर्दछ ...
नियमित रूपमा परीक्षणको लागि उनीहरूलाई डाक्टरमा लग्दै
मैले उनीहरूलाई घरको रक्तचाप मेसिन पाएँ
जाँच गर्दै उनीहरूको रक्तचाप औषधी लिन्छन्
नर्सि home-होम GP नियमित जाँच गर्दछ
उच्च रक्तचाप डिमेन्शियाका लागि अर्को नियन्त्रणयोग्य जोखिम कारक हो। स्वास्थ्य पेशेवरहरूले प्रत्येक 1-2 बर्ष परीक्षण गर्न सिफारिस गर्छन् तर अधिक जोखिम कारकहरू छन् वा यदि औषधि परिवर्तन भयो भने।
किन यो काम गर्दछ: उच्च रक्तचापले मस्तिष्कको रक्तवाहिकाहरूलाई हानी पुर्‍याउँछ र साँघुरो पार्छ र रक्तवाहनलाई फोड्ने जोखिम बढाउँदछ, कोशिका मृत्यु हुन्छ र स्मृति, सोच्न वा भाषा सीपलाई असर गर्दछ। यसलाई भास्कुलर डिमेंशिया भनिन्छ। उच्च रक्तचाप पनि टाऊ प्रोटीनको टेang्गलसँग सम्बन्धित छ जुन अल्जाइमर रोगको चिनारी हो।
डिमेन्शिया बिरामीहरूले आफ्नो स्वास्थ्यलाई वेवास्ता गर्छन्, भेटघाट बिर्सछन् र औषधि लिन बिर्सन्छन्। औषधीको साथ रक्तचाप घटाउने नियन्त्रण गर्न को लागी एक सजीलो जोखिम कारक हो। हेरचाहकर्ताको रूपमा, तपाईं नियमित चेक-अपहरू व्यवस्थित गर्न सक्नुहुनेछ, उनीहरूको डाक्टरसँग सिधा कुरा गर्नुहोस्, र जाँच गर्नुहोस् कि औषधी लिइएको छ। फार्मेसीहरूले "ब्लिस्टर प्याक" मा घर-घरका गोलीहरू पुर्‍याउन सक्छ, र स्मार्ट औषधि प्रबन्धकहरूले पनि मद्दत गर्न सक्छन्।
स्काइप तपाईको अभिभावकले औषधि लिईरहेको छ वा घरको रक्तचाप मेशिन सही र नियमित रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ भनेर जाँच्न मद्दत गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अन्तत:, भ्रमण गर्ने वा साइटमा नर्सलाई रक्तचाप औषधीको अनुपालन सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्न सक्छ।
म मेरो अभिभावकलाई नियमित व्यायाम गर्न प्रोत्साहित गर्दछु ...
कार्डियो तालिमको आयोजन जस्तै हिडाइ
प्रशिक्षण शक्ति / सन्तुलन प्रशिक्षण
हामी उनीहरूको व्यायामलाई स्काईपमा साप्ताहिक रूपमा नेतृत्व गर्दछौं
तिनीहरू शारीरिक रूपमा कुनै पनि आन्दोलन भन्दा टाढा छन्
मैले कोशिश गरेमा म तिनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न सक्दिन
नियमित व्यायाम पाउनु अर्को नियन्त्रणयोग्य जोखिम कारक हो। स्वास्थ्य पेशेवरहरूले एक हप्ताको 150 मिनेट मध्यम गहन व्यायामको सिफारिश गर्छन्, बल प्रशिक्षण संग कार्डियो संयोजन।
किन यो काम गर्दछ: व्यायामले पुरानो जडानहरू कायम राख्न र नयाँ बनाउनको लागि मस्तिष्कको क्षमतालाई प्रोत्साहित गर्दछ। शक्ति / सन्तुलन प्रशिक्षण झराहरूको जोखिम कम गर्न को अतिरिक्त लाभ छ।
डिमेन्शिया व्यायाम गर्न प्रेरणा टाढा लिन सक्छ। डिमेन्शिया बिरामीहरू कम साथीहरू र आगन्तुकहरू तिनीहरूलाई शारीरिक गतिविधिहरूमा संलग्न हुन सक्ने सम्भावना छ, कम रुचि र चासोहरूको लागि आन्दोलन आवश्यक छ, र पतनको ठूलो जोखिम। एक हेरचाहकर्ताको रूपमा, तपाईं नियमित हिडनहरू जस्तै शपिंग ट्रिपहरू व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय जिम, वरिष्ठ क्लब, वरिष्ठ दिवस केन्द्र वा वृद्ध हेरचाह सुविधा बुजुर्गहरूको लागि विशेष कक्षा चलाउन सक्छ। पर्याप्त गतिशीलता नभएसम्म बगैंचालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।
वृद्ध आमाबुवाहरू जो प्रायः घरका बाउन्ड छन्, केहि परिवारले स्काइपको प्रयोग गरेर स्क्रीन सेयर वरिष्ठका व्यायाम भिडियोहरू गर्न वा केही सरल घरेलु व्यायामहरू मार्फत अग्रणी "ग्रान" मा मोड्नका लागि प्रयोग गर्छन्। यो प्रेरक हो र कार्यक्रम अनुपालन बढाउँछ।
सहि स्तर र व्यायामका प्रकारहरूको सल्लाहका लागि जीपीसँग कुरा गर्नुहोस्, र वरिष्ठका लागि स्थानीय सामाजिक व्यायाम गतिविधिहरूको बारेमा विचारहरूको लागि।
म मेरो अभिभावकलाई उदासिनता कम गर्न सहयोग गर्दछु ...
डिप्रेशन एपिसोडहरूको लागि आँखा बाहिर राख्दै
एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर परामर्श
नियमित आमने सामने कुराकानी आयोजना
तिनीहरूसँग स्काइप मार्फत आमनेसामने कुरा गर्दै
तिनीहरू कहिलेकाँही दुखी हुन्छन् तर मलाई निराश लाग्दैन
डिप्रेसन डिमेन्शियाका लागि अर्को नियन्त्रण योग्य जोखिम कारक हो। दुर्भाग्यवस, डिप्रेसन लक्षणहरू प्रायः वृद्धहरूमा बेवास्ता गरिन्छ। एउटा सर्वेक्षणले देखायो कि 50% ती पाको उमेरको हेरचाहमा कम्तिमा डिप्रेसनको एक लक्षण हुन्छ।
किन यो काम गर्दछ: डिप्रेशन एपिसोडले दिमागमा शारीरिक प्रभाव पार्दछ।
हेरचाहकर्ताको रूपमा, मुड र व्यक्तित्वमा क्रमिक परिवर्तन देख्न गाह्रो हुन सक्छ। नियमित रूपमा मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरको लागि तपाईंको बुढो आमाबाबुलाई लिएर एक अवस्थित डिप्रेसन अवस्था प्रबन्ध गर्नुहोस्, र यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि निर्धारित औषधि कहिले पनि नछुटाईन्छ।
बुढेसकालमा सामाजिक अलगाव र एकाकीपन डिप्रेसनसँग जोडिएको छ। यद्यपि भर्खरको OHSU अध्ययन1 देखाउनुहोस् कि केवल आमनेसामने कुराकानी - विशेष गरी परिवार र साथीहरूसँग, र मा कम्तीमा3हप्तामा एक पटक - डिप्रेसन जोखिम आधा हुन सक्छ। सब भन्दा पछिल्लो अध्ययन2 स्काईप मार्फत नियमित सम्पर्कको उही फाइदाहरू देखायो! भिडियो कलिंग अनुहार-अनुहार सम्पर्क बढाउने उत्तम तरिका हो, विशेष गरी उनीहरूको लागि जसले दैनिक परिवार र साथीहरू देख्दैनन्।
Teo et al "के सामाजिक सम्बन्धका विभिन्न प्रकारहरूसँग सम्पर्कको मोडले पुरानो वयस्कहरूमा डिप्रेशनको पूर्वानुमान गर्छ?" J Am Geriatics Soc 2015
टेओ एट अल "ब्लूजलाई हराउन स्काईपको प्रयोग गर्दै: राष्ट्रिय प्रतिनिधि नमूनाबाट अनुदैर्ध्य डेटा" अमेरिकी जर्नल अफ जेरियाट्रिक साइकियट्री एक्सएनयूएमएक्स
म यो सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछु कि मेरो बुबाआमाले द्वारा धेरै मानसिक उत्तेजना छ ...
पजल, पुस्तक र खेलहरू प्रदान गर्दै
प्रत्येक हप्ता नयाँमा भर्ना गर्दै
सामाजिक संलग्नताको प्रशस्त आयोजना गर्दै
पर्याप्त मानसिक व्यायाम पाउनु अर्को नियन्त्रणयोग्य जोखिम कारक हो। मस्तिष्कलाई उत्तेजित गर्ने र मस्तिष्क कोशिका व्यायाम गर्ने धेरै गतिविधिहरूको अनुभव लिन महत्त्वपूर्ण छ।
किन यो काम गर्दछ: व्यायाम जस्तै, मानसिक उत्तेजनाले संज्ञानात्मक समारोह सुधार गर्दछ।
क्रियाकलापहरू बहु कार्यहरू संलग्न गर्दछ वा संचार र अन्तर्क्रिया आवश्यक पर्दछ सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यस कारणका लागि, सामाजिक संलग्नता मानसिक उत्तेजनाको उत्तम रूप हो।
यो विश्वास छ कि हामी मानिसहरु हाम्रो ठूलो र जटिल दिमाग विकसित भयो ताकि हामी राम्रो कुराकानी गर्न सक्दछौं। कुराकानीले शिकारीलाई प्रभावकारी रूपमा सहयोग पुर्‍याउँछ। यसले ती फलफूल र जामुनलाई स्थान र मार्गहरू सञ्चार गर्न सक्षम गर्दछ। ती बच्चा हुर्काउनेहरूले राम्रो सहयोग गर्न र अरूलाई खतराको चेतावनी दिन चेतावनी दिन सक्छन्।
आमनेसामने कुराकानीले भाषा (फोनेटिक्स, सिन्ट्याक्स र सिमेन्टिक्स), अनुहारको आन्दोलन, शरीरको भाषा, भावनाहरू, साझा सम्झनाहरू र आशयका लागि मस्तिष्कको धेरै क्षेत्रहरू समावेश गर्दछ।
एक OHSU अध्ययन1 दैनिक अनुहार देखि अनुहार भिडियो कलहरू मार्फत सामाजिक अन्तरक्रिया बढाउनु संज्ञानात्मक समारोह सुधार गर्नको लागि एक आशाजनक हस्तक्षेप हुन सक्छ भनेर देखाउँदछ।
एक समर्पित भिडियो फोन अतिरिक्त यात्रा को आवश्यकता बिना, परिवार र साथीहरूको साथ आफ्नो बुढो आमा बुबा को लागी अनुहार सम्पर्क बढाउन एक उत्तम तरिका हो।
होज एट अल "वेब-सक्षम कुराकानी अन्तर्क्रिया संज्ञानात्मक कार्यहरू सुधार गर्ने विधिको रूपमा:6- हप्ताको अनियमित नियन्त्रित परीक्षणको नतीजा" अल्जाइमर र डिमेन्शिया: अनुवादन अनुसन्धान र क्लिनिकल हस्तक्षेप 2015
म मेरो बुढा बुबाआमा देख्छु ...
हप्तामा एक पटक भन्दा कम
1 प्रति3पटक हप्ता
प्रति हप्ता3पटक
अरूसँग मौखिक संचारले मेमोरी, भाषिक कौशल, ध्यान, कार्यकारी समारोह र अमूर्त तर्क अभ्यास गर्दछ। आमने सामने सञ्चारले दृश्य प्रसंस्करण र बान्की पहिचान, अनुहारको आन्दोलन र अर्थ र भावना व्यक्त गर्ने शरीर भाषाको व्याख्या, र साइकोमोटर सीपसँग जोडेको इशाराहरू र आन्दोलनको समन्वित प्रयोगको व्यायाम गरेर यसमा उल्लेखनीय जोड दिन्छ।
परिवार र साथीहरूको साथ आमने सामने कुराकानी आवश्यक छ हप्तामा3पटक डिप्रेसन जोखिम लाई मापन योग्य बनाउन।
किन यो काम गर्दछ: एकान्त पजलले भन्दा दिमागको अधिक व्यायामको स्पष्ट फाइदाहरू बाहेक, सामाजिक संलग्नता परिवार र साथीहरूको साथ माथिको अन्य सिफारिसहरूको प्रत्येकलाई हिट गर्न सकिन्छ:
अनुसन्धानले सामाजिक अलगाव वा एकाकीपनलाई कम निन्द्रासंग जोड्दछ1, dementia2, अवसाद3, मुटु रोग4 र विकृति5.
संक्षिप्तमा, आमने सामने सामाजिक संलग्नता is अत्यावश्यक डिमेंशिया जोखिममा वा पागलपनबाट पीडितहरूका लागि। यो मस्तिष्क को प्रमुख क्षेत्रहरु व्यायाम, र सकारात्मक अन्य प्रमुख जोखिम कारकहरु लाई प्रभावित गर्दछ।
कुरिना एट अल "एकाकीपन स्लीप फ्रगमेन्टेसनसँग सम्बन्धित छ ..." स्लीप एक्सएनयूएमएक्स
होल्वर्डा एट अल "एकाकीपनको भावनाहरू ... डिमेन्शिया शुरुआतको पूर्वानुमान गर्नुहोस्" जे न्यूरोल न्यूरोसर्ग साइकियट्री एक्सएनयूएमएक्स
मीड एट अल "डिप्रेशनल लक्षणहरूमा मित्रता हुने प्रभावहरू" ब्र जे साइकियट्री एक्सएनयूएमएक्स
हक्ले एट अल “एकाकीपनका मामिलाहरू” एक व्यवहार चिकित्सा 2010
स्टेप्टो एट अल "सामाजिक एक्लोसन, एकाकीपन, र वृद्ध पुरुष र महिलामा सबै कारण मृत्यु दर" प्रोक नेटल एकेड साइ यूएसए एक्सएनयूएमएक्स
पागलपनको रूपमा पागलपनको बारेमा म के गर्न सक्छु?
आशा छ, हाम्रो क्विजले तपाईंलाई केहि नयाँ उत्तरहरू दिन्छ।
कृपया मलाई मेरो क्विज परिणामहरू पठाउनुहोस्
कृपया मलाई पठाउनुहोस् Konnekt मेमोरी नोक्सानीको बारेमा लेख
पोष्ट / पृष्ठ आईडी
पोष्ट / पृष्ठ शीर्षक
फारम आईडी:, 44, फारम नाम: डिमेन्शिया क्यारियर क्विज, पोष्ट / पृष्ठ आईडी: 977 27, पोष्ट / पृष्ठ शीर्षक: डिमेन्शिया फोन, मिति (dmy): २२/०11/२०१२, प्रयोगकर्ता आईपी ठेगाना: २2021००: b2400: :: :: 800 , इम्बेड URL: https: // www।konnekt.com.au / डिमेंशिया-फोन /, HTTP रेफरर URL:
पागलपा: तपाईलाई मद्दत गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ?
यो Konnekt भिडियोफोनले3तरीकामा डिमेंशिया पीडितहरूलाई मद्दत गर्दछ:
आमने सामने सामाजिक अन्तर्क्रिया। बढेको दैनिक भिडियो कल मार्फत सामाजिक कुराकानी थियो चिकित्सा अध्ययनमा देखाईयो लाई संज्ञानात्मक समारोह सुधार गर्नुहोस् मात्र6हप्ता पछि।
स्वतन्त्रता & सामाजिक संलग्नता। जडान गर्न एक छुनुहोस्। सम्झनको लागि केहि छैन। अविश्वसनीय सरल
भित्र हेर्नुहोस्। 2- तरीका भिडियोको साथ स्वत: जवाफले छोरा, छोरीहरू र हेरचाहकर्ताहरू द्वारा भिजुअल चेक इन अनुमति दिन्छ।
विश्वको सब भन्दा सजिलो अल्जाइमर / डिमेन्शिया फोन
सम्झनको लागि केहि छैन। मेनू छैन, लगइनहरू वा आइकनहरू।
कुनै सीप आवश्यक छैन। कुनै किबोर्ड / माउस छैन। कुनै पप-अप छैन.
कलहरू मोबाईलहरू, आईप्याडहरू / ट्याब्लेटहरू र कम्प्युटरहरू अनुहारको सामना.
ल्यान्डलाइन्स कलपनि। GPs, पुरानो परिवार, ब्याकअप नम्बरहरू।
सँधै खुला। चार्ज गर्न वा स्विच गर्न केहि पनि छैन। कुनै मोड छैन.
एक स्पर्श कल गर्न। शून्य स्पर्श लाई स्वत: उत्तर हेरचाह गर्ने
देख्ने नाम कल गर्नेको। अज्ञात कलरहरू ब्लक गर्दछ।
छोरा, छोरीहरू, हेरचाहकर्ताहरूका लागि सजिलो समाधान
Konnekt गर्छ हरियो तपाईंको लागि: सेटअप, निजीकरण, कल गुणस्तर अप्टिमाइजेसन। हामी तपाईंको परिवारलाई स्काईपमा जान मद्दत गर्दछौं।
We यसलाई जारी राख्नुहोस्पनि। हामी तपाईको आईटी समर्थन हौं। र हामी तपाईको लागि सबै परिवर्तन गर्दछ टाढा बाट।
30 दिन को लागी प्रयास गर्नुहोस्
एक ट्याब्लेट पीसी वा मोबाइल प्रयोग गर्नका बारे हेरचाह गर्नुहुने जिय्यात्रिकलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ निराश.
वेन्डी भन्छिन् कि उनको भिडियो टेलिफोन भन्दा सरल छ।
वरिष्ठ गर्नुहोस् ट्याब्लेटहरू काम गर्छन्?
हाम्रो बजार अनुसन्धानले पत्ता लगायो कि 75 मा अधिक geriatric सीनियरहरु को लागी डिजाइन गरीएको सरलतम ट्याब्लेटहरु को उपयोग गर्न पनि समस्या छ।
उपलब्ध उत्पादनहरूसँग स्क्रीनहरू छन् जुन धेरै सानो छ र खण्डहरू पनि कम छन्। प्रतीकहरू चकित र सम्झन गाह्रो छ - विशेष गरी जसको यादको लागि राम्रा दिनहरू छन्। भोल्युम बटनहरू दस्तक गर्न धेरै सजिलो छ। अस्थिर वा अस्थिर औंलाहरू सँधै किनारमा घस्रन्छन् र गल्तिले सेटि settingsहरू परिवर्तन गर्दछ वा अनावश्यक अनुप्रयोगहरू चालू गर्दछ। सबै भन्दा, पाठ सानो छ - सामान्यतया ती आइकनहरूको लागि ठाउँ बनाउन। त्यहाँ केवल धेरै विकल्पहरू छन्। मेनू ग्रानको घरको टेलिफोनको भाग थिएनन, त्यसो भए उनलाई अहिले मेनूको किन आवश्यकता छ?
पोर्टेबिलिटी सिद्धान्त मा महान छ। अभ्यासमा, यो हराउने, गलत ठाउँमा राखिएको र खसेको उपकरणहरूमा परिणाम दिन्छ। उपकरणहरू जुन कोठामा लगिन्छ जहाँ Wi-Fi गरीब छ र घण्टी सुन्न सकिँदैन।
धेरै उत्पादकहरू क्रिम सीनियर्स ट्याब्लेटहरूका सुविधाहरू पूर्ण छन्। सुविधाहरू जुन हजुरआमालाई सायद आवश्यक पर्दैन, जस्तै ईमेल, मौसम नक्शा र टेक्स्टिंग। प्रायः 80० बर्षे उमेरका बच्चाहरु कुनै चीज भन्दा एक कुरा चाहान्छन्: परिवारसँग र साथीहरूसँग जोडिएर बस्नुहोस्, आमनेसामने बस्ने… र हुनसक्छ, यदि यो अत्यन्तै सजिलो छ भने, आफ्नो हजुरआमाहरूका फोटोहरू हेर्न र कुरा गर्न।
बुजुर्गहरुको सर्वेक्षणले देखायो कि 80% भिडियो कल गर्न को लागी तयार छ। यो कत्ति गाह्रो हुन सक्छ?
वरिष्ठहरू यी वरिष्ठ ट्याब्लेटहरू प्रयोग गर्न संघर्ष गर्छन्, र निराश महसुस गर्छन्।
हामी यी कल गर्दछौं शीर्ष-दराज फिलरहरू। तिनीहरू शीर्ष ड्रयरमा अन्त्य हुन्छन्, अन्य प्रयोग नगरिएका ग्याजेटहरूका साथ!
यो Konnekt समाधान
त्यो किन हो यस कम्पनीका संस्थापकहरू, कार्ल र जोन, सृष्टि गर्नुभयो Konnekt भिडियो फोन। तिनीहरू आवश्यकता देख्यो तिनीहरूको आफ्नै आमा बुबा को को आफ्नो परिवार र साथीहरु लाई हेर्न को लागी को लागी को लागी, यात्रा को लागी को लागी।
30- दिन ट्रायल
टिभीमा देखिएझैं क्यारोल ओ'हलोरनसँग
चिकित्सा अध्ययन: सुन्नुहोस् कसरी भिडियो कुराकानीले डिमेन्शियालाई मद्दत गर्न सक्छ
डिमेन्शिया अध्ययन: आमने सामने कुराकानी सहयोग गर्दछ
मार्फत सामाजिक अन्तरक्रिया बढेको दैनिक अनुहारको सामना कलहरू लागि6सप्ताह हालसालै भएको थियो OHSU अध्ययनमा देखाईयो को लागि एक आशाजनक हस्तक्षेप हुन संज्ञानात्मक समारोह सुधार। यो परिवारका सदस्यहरूका लागि यात्रा गर्न असमर्थ, अत्यन्त व्यस्त वा प्राय: धेरै टाढा टाढाको लागि असमर्थ समाचार हो।
के तपाईंको अभिभावक डिमेन्शियाको जोखिममा छन्? A प्रयोगकर्ता मैंत्री इन्टरफेस स्वीकार्यता र पालनको लागि कुञ्जी हो। यदि यो हो सजिलो, तिनीहरूले यसलाई प्रयोग गरिरहने छ।
चिकित्सा पत्रिका र समाचार लेखहरूमा देखा पर्दा
विजेता, वृद्ध हेरचाहमा उत्तम उपभोक्ता मैत्री उत्पादन
Konnekt भिडियोफोनको रूपमा चयन गरिएको थियो वरिष्ठका लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प घरमा बस्दै, स्वतन्त्र वा केयर होममा, उद्योगको विशेषज्ञहरूको प्यानल द्वारा उद्योगको नयाँ कार्यक्रममा वृद्ध-हेरचाह टेक्नोलोजीहरूको लागि प्रिमियर कार्यक्रममा।
हाम्रो भिडियोफोन 50० भन्दा बढीको गाईडमा छ
चिकित्सा क्लिनिकहरू, फार्मेसीहरू र अन्यहरू द्वारा वितरित राष्ट्रिय गाईड। यो लेखमा हाम्रो ग्राहक ग्राहमको कथा प्रस्तुत गरिएको छ जसको श्रीमतीको भर्खरै बितिसकेको थियो। ऊ एक्लो महसुस गर्दै नर्सि home घरमा लगियो र डिप्रेसनमा डुबेको थियो। भिडियोफोनले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्‍यो.
सामाजिक अलगाव र डिप्रेसन जोखिम
सामाजिक अलगाव तपाईंको मानसिक स्वास्थ्यको लागि खराब छ, र नियमित अनुहार बाट सामाजिक अन्तरक्रिया सम्भवतः उदासीनता रोक्न मद्दत गर्ने एक उत्तम तरिका हो - डा। Alan Teo, प्रो OHSU
संज्ञानात्मक समारोह वृद्धि भयो
मार्फत सामाजिक अन्तरक्रिया बढेको दैनिक अनुहारको सामना कलहरू weeks हप्ताको लागि हालसालै OHSU अध्ययनमा संज्ञानात्मक समारोह सुधार गर्नको लागि एक होनहार हस्तक्षेप हुन देखायो।
अष्ट्रेलिया देखि क्यानाडा, को Konnekt भिडियो फोनले प्रियजनहरूलाई व्यस्त र प्रेरित गरिरहेको छ, घरदेखि लिएर ठूला आवासीय घटनाहरू सम्मिलित
भिडियोफोनले जीवन बचाउन मद्दत गर्दछ
Konnekt भिडियो फोनले मेरो आमालाई कल्पना गर्न मद्दत ग ,्यो, म पक्का निश्चित छु कि मेरी आमाले 24-48 घण्टा भित्र उनको एकाईमा एकदम भयावह मृत्यु भोग्नुहुने थियो - चेरिल कोल्फ, छोरी, अष्ट्रेलिया
चेरिल संयुक्त राज्य अमेरिका मा विदेशमा थियो। उनकी आमा जुडी जीवनलाई जोखिममा पार्ने आंत्र अवरोधबाट पीडित थिइन्, तर डिमेन्शियाले उनलाई आफ्नो पीडा मौखिक रूपमा रोक्नुभयो। Konnekt अटो-उत्तरको साथ भिडियोफोरोनले चेरिललाई उनको आमा कति अस्वस्थ भएको हेर्न, सान्त्वना दिन, र प्यारामेडिक्सको साथ आमने सामने कुरा गर्ने अनुमति दिए।
अब, Sandy ले निरीक्षण गर्न र उनको आमा पानी पिउन प्रोत्साहित गर्न सक्छ।
आमाको पागलपनले उनलाई बुझ्दछ। उनीले फोन उठाउन वा एक बटन थिच्न सक्दिन कसैले त्यसो गर्न भन बिना। Konnekt चयनित सम्पर्कहरूको लागि यो स्वत: उत्तर क्षमताको साथ समस्या समाधान भयो। अब, उनको अनुहार उज्यालो भयो जब उनी कल आउँछिन्। सबै भन्दा राम्रो, पर्याप्त पानी खपत अब एक ठूलो चुनौती छ। - Sandy Flohrs, छोरी, MN USA
पहिल्यै सुधार देखिएको छ
म तपाईंको अभिनव उत्पादसँग खुशी छु र मैले पहिले नै नर्मामा देखेको सुधारहरूको लागि धेरै आभारी छु (उनको महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक गिरावट छ)। - अमांडा हिल, छोरी, मलेशिया
डिमेंशिया विशिष्ट प्रमुख विशेषताहरु
अधिक स्वीकृति / पालनको लागि सजिलो प्रयोगकर्ता इन्टरफेसको साथ महत्त्वपूर्ण आमने सामने कुराकानी सक्षम गर्दछ
एक स्पर्श नाम कल बटन - संसारको सब भन्दा सजिलो फोन, कहिल्यै
कुनै मेनू, आइकनहरू, चार्जिंग छैन - केहि पनि याद राख्नु हुँदैन
स्वत: उत्तरहरू विश्वसनीय क्यारियरहरू, २-मार्ग भिडियोको साथ - चिन्ता कम गर्दछ
ब्लक टेलिमार्केटरहरू, स्क्यामरहरू, जालसाजीहरू - सुरक्षा बढाउँछ
नोएलको संज्ञानात्मक सुधार
नोएलमा गम्भीर पागलपन छ। ऊ आफ्नी छोरी भ्यालेरीलाई टेलिफोनबाट चिन्न सकेन। यो भालेरीका लागि ह्रदय विदारक थियो किनभने उनी lives घण्टा टाढा बस्छिन् र बुबालाई प्राय: अनुहार देख्न असमर्थ थिए। सम्म ...
नोएलको नयाँ भिडिओफोन स्वत: उत्तर भलेरी कलहरूमा सेट अप गरिएको थियो। भालेरी धेरै हप्तासम्म अडी रह्यो, उनीसँग आमनेसामने कुरा गर्दै। धेरै डिमेंशिया-विशेष सुविधाहरू र धन्यवाद Konnektनिरन्तर समायोजनहरुमा नोएलले आफ्नी छोरीलाई याद गर्न थाल्यो। ऊ अब स्वत: जवाफ बिना कलहरूको जवाफ दिँदै छ र भ्यालेरी स्वतन्त्र रूपमा डायल गर्दैछ।
हामीले नोएलको सुधार आफ्नै आँखाले देख्यौं, र चिकित्सा प्रमाणहरूले यसलाई समर्थन गर्दछ। यो केवल एउटा उदाहरण हो।
30 दिन को लागी प्रयास गर्नुहोस्। कुनै जोखिम छैन।
मेमोरी गुम्दा खराब हुनको लागि कुर्नुहोस्।
अब फेला पार्नुहोस् कि तपाईं एक गैर-बाध्यता परीक्षणको लागि योग्य हुनुहुन्छ कि छैन।
विश्वव्यापी रूपमा उपलब्ध छ।
ममा रुचि छु Konnekt भिडियोफोन 30- दिन परीक्षण
फारम आईडी:, 36, फारम नाम: पुस्तक एक परीक्षण, पोष्ट / पृष्ठ आईडी: 977 27, पोष्ट / पृष्ठ शीर्षक: डिमेन्शिया फोन, मिति (dmy): २२/०11/२०१२, प्रयोगकर्ता आईपी ठेगाना: २2021००: b2400: :: :: 800 , इम्बेड URL: https: // www।konnekt.com.au / डिमेंशिया-फोन /, HTTP रेफरर URL:
Or हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.